Kaalay Wax Kabaro: Farsamada Baabuurta, Noocyada Baabuurta iyo Qaybaha Makaanikada Baabuurta | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxamed Xirsi Faarax — March 27, 2020
Cilmiga waa waxa ay bulshada ku horumarto. Halkaan waxaan inkuugu soo gudbinaynaa xirfada barashada baabuurta oo aan isleenahay bulshada ku hadashada afkaan Soomaaliga ah wey ka faa’idaysan karaan.
Barashada farsamada baabuurtu waa qayb aasaasi ah oo kamid ah cilmiga samaynta baabuurta, kaas oo ay kushaqeyaan wadamada warshadaha leh, halka dadka baabuurta lehna ay kacaawiso in ay gartaan ciladaha marka Gaarigu uu ka ciladoobo. Sidoo kale farsamada baabuurtu waa xirfad qofkii bartaa kacaawinaysa in uu kushaqaysto kuna baranayo dhamaan agabka baabuurta.
Xirfada barashada farsamada baabuurtu waxa ay koobsataa; barashada nidaamayada matoorka gaariga ushaqeeyo, dhamaan agabka gaariga shaqadooda, ciladaha kudhaca iyo xalinta ama cilad saarida baabuurka.
Barashada farsamada baabuurtu waxa ay uqaybsantaa labo qaybood oo kala ah barashada dabka baabuurta iyo barashada makaanikada baabuurta. Barashada dabka baabuurtu waxa uu diirada saaraa sida ay ushaqeeyaan dhamaan xargaha iyo nidaamyada dhaliya dabka baabuurta, sida layrarka baabuurta, Saacadaha, Diinimada iyo Beteriga gaariga. Sidoo kale barashada makaanikada baabuurku waxa ay diirada saartaa nidaamyada makaanikeed ee Gaarigu kakooban yahay waxaana ugu muhiimsan Matoorka iyo sida uu ushaqeeyo, istaajinta Gaariga, kala jarida matoorka iyo Kaambiyaha, Santuukha geerka iyo maamulida leexleexashada baabuurka.
Baabuur: Waa qalab laysku xirxirey oo lagu magacaabay baarbuur kaas oo samaynaya dhaqdhaqaaq hore iyo gadaal ah, waana mid loo isticmaalo gaadiid ahaan, kaas oo kuu sahlaya in aad uga kala gooshto dhul in dheer isku jira wakhti kooban gudihiis, laguna kala gudbisto maciishadaha si loo gaarsiiyo halkii larbay.
Baabuurta waxaa loo qaybiyaa qaabab badan, sida ayaga oo laga eegayo muqaalkooda, matoorkooda, xawaarahooda, qaabka istaagidooda, socodkooda iyo iwm. Laakiin kala qaybinta ugu muhiimsan ee Baabuurtu waa in laga eego dhanka matoorka, iyo qaab gudbintiisa awoodeed.
3. Matoorka Baabuurta iyo Qaab gudbintiisa awoodeed:
Marka laga eego baabuurta qaabka uu matoorku usaaran yahay iyo sida matoorku uu awoodiisa ugudbiyo waxaa loo qaybiya qaybahan soosocda:
Matoorka saaran qaybta hore ee baabuurka: matoorkan waxa uusaaran yahay qaybta hore ee baabuurka waxa uuna ka horeeyaa labada shaag ama taayir ee hore, waxa uuna awooda ugudbiyaa labada taayir ama shaag ee dambe ama farta shaagba waa uu gaarsiyaa awoodiisa. Baabuurta uu horey kasaaran yahay matoorku waxaa kamid ah baabuurta yaryar ee raaxada sida maarkeetyada, saarufyada iyo iwm.
Matoorka saaran qaybta dhexe ee Baabuurka: waxa uu udhaxeeyaa shaagaga hore iyo shaaga dambe, waxa uuna u ooli karaa qaab dhinac dhinac ah, qaab gees gees ah ama qaab taag ah, waxa uuna tamarta (awooda) ugudbiyaa shaagaga dambe. Mar waxa uu kuxiran yahay shaashagaga hore gadaashooda marna waxa uu kuxiran yahay shaagaga dambe hortooda, meelahaas oo ah inta udhaxaysa shaagaga hore iyo kuwa dambe. Sidoo kale waxaa isticmaala qayb kamid ah baabuurta yaryar iyo kuwa waa wayn.
Matoorka saaran qaybta dambe ee Baabuurka: matoorkan waxa uu ka dambeeyaa shaagaga dambe ee gaariga waxa uuna u ooli karaa si dherer ah, si taag ah iyo si jiif ah ama dhinacdhinac, waxa uuna awooda ugudbiyaa shaagaga dambe. Inta badan Baabuurta waaweyn ayaa isticmaala, sida Baabuurta waa way ee dalxiiska.
Marka laga laga eego qaabgudbinta awooda matoorku waxaa loo qaybiyaa labo qaybood oo kala ah;
Kow: in uu matoorku awooda ugudbiyo shaagaga ama taayirada dambe oo kaliya.
Labo: iyo in uu matoorku awooda ugudbiyo dhamaan taayiradiisa ama shaagagiisa oo idil.
Qaybaha baabuurka ee makaanikada:
Baabuurku waxa uu kakooban yahay qaybo kala duwan oo midkasta ay leedahay shaqo ugaar ah. Marka aynu qeexno baabuur iyo sida uu ushaqeeyo sidhakhso badadana iskugu gayno waxaa ugu yeernaa magacayo midkasta u gaar ah tusaalle: bareeg, matoor iyo iwm.
Makaanikada baabuurtu waxa ay uqaybsantaa sadex qaybood oo waa weyn:
Boodhiga (buudiga): waa qaybta ugu wayn gaariga taas oo siisa haykalka gaariga ee qaab dhismeedkiisa, waxaana ku xirma inta badan agabka baabuurka. Boodhiga waxaa uu uqaybsamaa labo qaybood oo kala ah:
Qaybaha banaanka: qaybaha banaanka ee boodhiga gaariga waxaa ka mid ah; Turuusyada, Kabarka, Baangadaha, Muraayadaha, Kirishtaalayaasha iyo iwm.
Qaybaha gudaha: qaybaha gudaha ee gaariga waxaa kamid ah; Dhashkabarka, Saacadaha, Isteerinka, Leebada geerka, Haan bareega, Bareega, Baylasha iyo iwm.
Caqaayadaha: waaa qaybta daboosha gaariga muujisana quruxda gaariga, sidoo kale caqaayadaha waxaan ugu yeeri karnaa daboolka gaariga.
Wareegyada: wareegyadu waa qaybta dhalisa socodka gaariga dhamaantoodna waxa ay kuxiran yihiin ama kujiraan gudaha gaariga waxaaana kamid ah: Jeenta, Candhooyinka, Kaanbiyaha, Hobsaanta iyo Matoorka oo ah halka uu wareega gaarigu ka bilowdo.
Tags: Kaalay Wax Kabaro: Farsamada BaabuurtaNoocyad Baabuurta iyo Qaybaha Makaanikada Baabuurta
Next post Ma Loo Dhiman Karaa Fayruska Korona?
Previous post Maxaad Ka Taqaana Cudurka Laga Qaaddo Istaaga Badan?
March 27, 2020 at 6:44 pm	— Reply
Mohamed hersi waad mahadsantahay sxb. Wax badan bad umadda u faaidenasaa.
Horey u soco sxb.
April 1, 2020 at 6:12 am	— Reply
…walaahi Cashir muhiim ah ayuu ahaa walaal wax walbo oo Ku saabsan Gawaadhida Hadaad awoodo Nala wadaag Aan Kaa faa’iidaysane
April 7, 2020 at 12:37 pm	— Reply
Jazakalah wll horay usoco